‘दाल, भात, तरकारी’ लाई युट्युबमा कमेन्ट गर्न नमिल्ने, दर्शकसँग डराएकै हो त मह जोडी ? « Pariwartan Khabar
‘दाल, भात, तरकारी’ लाई युट्युबमा कमेन्ट गर्न नमिल्ने, दर्शकसँग डराएकै हो त मह जोडी ?
16 December, 2020 5:14 pm
करिब २ बर्ष अघि हलमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र दाल, भात, तरकारी केहीदिन अघिमात्र युट्युबमा रिलिज भएको छ । हाल युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो स्थानमा रहेको चलचित्रले राम्रो भ्यूज बटुलिरहेको छ । मह सञ्चार नामक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको चलचित्रलाई दर्शकले २० लाखभन्दा बढी पटक हेरिसकेका छन् ।
तर उक्त चलचित्रमा दर्शकले आफ्नो प्रतिक्रिया भने दिन पाएका छैनन् । चलचित्रको कमेन्ट सेक्सन नै बन्द गरिएको छ । हलमा प्रदर्शनमा आउँदा दाल, भात, तरकारी लाई दर्शक र समिक्षक दुवैबाट निकै खराब प्रतिक्रिया मिलेको थियो । सायद त्यसैकारण युट्युबमा पनि दर्शकको गाली खाइने डरले कमेन्ट सेक्सन अफ गरिएको हुनसक्छ ।
यसबारे मह जोडीले भने अहिलेसम्म कुनैपनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । हरिवंश आचार्य, निरुता सिंह, पुष्प खड्का, आँचल शर्मा, राजाराम पौडेल, बर्षा राउत लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रलाई सुदन केसीले निर्देशन गरेका हुन् ।